दिलिप विष्टकाे त्याे बयान- ‘…उखुबारीमा लगेँ, …गरेँ, घा*टी नि*चोरेर मा*रिदिएँ’ (भिडियाे) – PathivaraOnline
Home > समाज > दिलिप विष्टकाे त्याे बयान- ‘…उखुबारीमा लगेँ, …गरेँ, घा*टी नि*चोरेर मा*रिदिएँ’ (भिडियाे)
दिलिप विष्टकाे त्याे बयान- ‘…उखुबारीमा लगेँ, …गरेँ, घा*टी नि*चोरेर मा*रिदिएँ’ (भिडियाे)
admin July 31, 2019 July 31, 2019 समाज	0
काठमाडाैँ । ‘निर्मलासँग जम्काभेट भयो । मनमा पाप जाग्यो । साइकल फाल्दिएँ । उखुघारीमा लगेँ । से*क्स गरेँ । रु*न थाली । घाँटी निचोरेर मा*रिदिएँ ।’ यी शब्द हुन्- दिलिपसिंह विष्टका ।यसरी दिलिपसिंह विष्टले प्रहरीसामू निर्मला पन्तको ब*लात्कार*पछि ह*त्या गरेको स्वीकारेका थिए । उनले प्रहरीको बयानमा जे–जे भनेका थिए, घटनाका अरु दसीसँग शतप्रतिशत मेल खान्छ । ह*त्यापछि सार्वजनिक तस्वीरमा निर्मलाको एकपट्टिको सुरुवाल मात्रै तल सरेको देखिन्छ । बयानमा वि*ष्टले पनि त्यहीं भनेका थिए ।
जबरज*स्त यौ*नस*म्पर्क गरेको भने पनि रगत नआएको र बी*र्य बाहिरै फालेको उनले बताएका छन् । नि*र्मलाको सुरुवालमा बीस रुपैयाँको नोट भएको र त्यसले नजिकैको पानपसलमा गएर गुट्खा किनेको बताएका छन् । जुनदिन उनले गुट्खा किन्दा २० रुपैयाँको नोट दिएको प्रष्ट भइसकेको छ ।राति घरपुग्दा उनको कपडा भिजेको थियो । उनी खोलाको बाटोहुँदै उखुबारी पुगेका थिए । परिवारले स्वीकारेको कुरालाई दिलिपले पनि स्वीकारेका छन् ।फरक बयानमा पनि उनले निर्मलाको साइकलमा अम्बाको दाना भएको बताएका छन् । जुनदिन बम दिदीबहिनीको घरबाट निर्मलाले अम्बा लगेको भनिएको छ ।
यसरी दिलिपसिंह विष्टले निर्मलाको ब*लात्का*रपछि ह*त्या गरेको स्वीकारे पनि केही मानवअधिकारकर्मीलगायतले ‘वास्तविक अपराधी जोगाउन प्रहरीले मानसिक अवस्था ठिक नभएको मानिसलाई जबर*जस्त अपराधी बनाउन खोजेको’ आरोप लगाए । त्यसपछि प्रहरी दिलिपसिंहको खासस्थितिबारे बुझ्न दिलिपसिंहको घरमा गयो । परिवारका सदस्यले ‘मानसिक स्थिति ठिक भएको तर दिलिपसिंहको मति ठिक नभएको बताए ।
दिलिपसिंह प्रायः बिहानै घरबाट निस्केर राति मात्रै घर आउँथेँ । निर्मलाको बलात्कारपछि ह*त्या भएको दिन पनि उनी राति मात्रै घर आएका थिए । घर आउँदा कपडा भिजेको थियो ।घरमा पनि उनको मति ठिक थिएन । आफ्नै बुहारीमाथि आँखा लगाउँथे । परिवारका सदस्य नै भन्छन्, ‘बरु जेलमै हुँदा आनन्द थियो । उनी मान्छेहरुले पागल ठानोस् भनेर कपडा च्या*तेर लगाउँथे ।
प्रहरीले खोजेका यी प्रमाणले दिलिपसिंह विष्टले नै निर्मलाको ब*लात्कार*पछि ह*त्या गरेको शंका गर्न कठिन छैन । तर, चौतर्फी दबाव परेपछि प्रहरीले दिलिपसिंहलाई छाडियो । र, उनको डीएनए पनि मिलेन ।दिलिपसिंहले अभियोग स्वीकारेको भिडियो बयान सार्वजनिक भएपछि निर्मलाको परिवारको शंका पनि दिलिपसिंहतर्फ सोझियो चैत यता । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका निलम्बित डीएसपी अंगुर जिसी त निरन्तर दिलिपसिंह नै दोषी रहेको दावी गरिरहेका छन् । किनकि दिलिपसिंहको बयान र घटनाक्रम ठ्याक्कै मिलेको छ । साभार NEWS24 बाट ।
शान्तिनगरमा स्कुटरले जेब्राक्रसिङ्गमा पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएपछि अस्पतालमा !
रु’कुम घटनाः यस्तो अवस्थामा भेटियो थप एक जनाको श:व, अझै एक बे’पत्ता
२१ बर्षे शंकर तामाङ ४ महिनादेखि अस्पतालको शैयामा जीवन र मृत्युसँग लडिरहेपछि सहयोग अपिल
निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने यी खतरनाक रोग ! यसका प्रमुख कारणहरू यस्ता छन् !
भ्वाइसको लाइभ शोमा कोच तृष्णाले सोनाम शेर्पालाई यसरी प्रपोज गरेपछि शो मै मच्चियो हंगामा
आयो खुसीको खबर: साउन १ देखि लामो दूरीमा गाडी चलाउन दिने तयारी तर अझै खोल्न नपाउने भए यस्ता ब्यवसायहरु
नेपाली सेनाका एक सिपालीले आफैँलाई‘ यस्तो के गरे…
गाडी रोकेर पिसाव फेर्ने जङलमा लग्यो २ जना साथीले भाग्यौं भने पछाडि बाट लखेटे…. (भिडियो हेर्नुस्)
आशा मारेको श्रीमान सुकशुल घर फर्किएर आएपछी ….( भिडियो हेर्नुस्)